sidee ku ogaan kartaa cuntada laga keeno israaiil ee loo dhoofiyo caalamka islaamka
Subject: sidee ku ogaan kartaa cuntada laga keeno israaiil ee loo dhoofiyo caalamka islaamka Mon Aug 30, 2010 10:05 pm
Ramadaan wanaagsan dhamaantiin, qalinka waxa aan u qaaday in walalahayga Somaaliyeed aan u iftiimiyo.
Qaabka iyo hanaanka loo ogaado dhamaan wax soo saarka ka yimaada wadamada horuumaray gaara ahaan qalabka ka yimaada Israel ee loo dhoofiyo dunnida Islaamka. oo maalmaha farxadaha ah uga faa'iidaysta in ay dhaqaale ka helaan ummada Islamka.
Wadamada Islaamka ayaa lagu daadguraynayaa cunooyin (cuntooyin) badan oo ka imanaya dhulka beeralyda falastiininyiint ah ee ay Israel haysato gaar ahaan daanta wabiga Jordan, cuntooyinka oo u badan liinta iyo saytuunka yaa lagu soo dhoofiyay sanduuqyo, kartooma iyo baco lagu qoray in wadamo kalle ay sameeyeen , hadii an tusaale u soo qadano Dariiqada aad ku ogaan karto Cunnada ( Cuntada) laga keeno Israel ee loo dhoofiyo caalamka Islaamka ? oo lagu keenay kartoomo ay ku qorantahay Made In South Africa iyo wadamo kale oo badan, faaf-faafinteduna ay tahay sidan
Cadadka kartoonkiiba : 5kilo
Qimmaha 1 kilo €;13
Jumlada Kartoonka €40
lakabkayada 5.4 /12
Hadaba sidee lagu gartaa shay ama qalab la keenay wadan kalle ?
Wadan kasta waxa uu leeyahay Code lagu garto wax soo saarkiisa, si fiican u fiiri shay marka aad soo gadato waxa uu leeyahay liiman mad-madoow oo oo ay tiro ku hoos qorantahay, waxaa la oo yaqanaa Xaradh am seerarka (baracode) kaas oo u kala baxa labo qaybood. oo midna loo isticmaalo dariiqada wax soo saarka ( proc-Production) midna loo isticmalo habka Maamulka iyo qaybinta
( supplies and management) waxayna u sii kala baxayaan labo qaybood :
-ka kowaad waxa uu leeyahay Xariijo taxane ah oo madoow
-ka labaadna wax uu leeyahay liiman cad-cad oo balaadhan oo is bar-bar socda ( aan-isku dhajisnayn )waxaana loo sii kal saaraya saddex qaybood oo kala ah :-
1. Bracode 2 / 5 : wuxuu qeexaa , Baaketgaraynta, shayga lagu qaadayo ( al-waaxa, Containerka) , iyo Warqadaha ( gudaha iyo dibeda)
2. Baracode 3 / 9 : wuxuu qeexaa Numberka Wadanka, Nooca, Kayda , Qiimaha, Qaybinta, Qaybta iyo khasnada.
3. EAN / UPC: wuxuu qeexaa isku dhafka guud Maacuunta iyo Qalabka Qulqula dariiqyada ganacsiga ee caalamka horuumaray.
Laakiin inta badan waxa ay isticmaalan Wadamada Europe Seerarka (barcodes)3/9 oo ah ka ugu firfircoon ee ugu caamsan xoogaana yara fudud iyo labadan nooc ee EAN iyo UPC oo ah kuwa ugu fudud EAN (European Articel Number) ,UPC ( Universal Product Code), labadani inta badan waa ay isku dhowyihiin laakiin EAN wuxuu xaqiijiyaa Lumberka wadanka. xusuusnoow sidoo kale EAN13
Inta ka dib Baracodka madoow ee ku qoran shayga aad soo gadatay waxaa ku hoos qoran tiro lumbaro ah kuwaas oo qeexaya macluumaadka guud shayganani uu ka koobanyahay sida magaca shayga, lambarka wadanka, qaybinta, kaydka
Tusaale : waxa aan soo gatay cream waxaan fiiriyay Lamberka ku hoos qoran seerarka madoow ee ( Baracode) oo ah sidan. 50 1225 1006811, hadaba Creamkii ayaad soo gadatay ,hadii aad dhib kala kulanto sideed ku ogaanaysaa wadanka sameeyay ama hadii aad rabto in aad iibsan alaab la keenay wadamo gaara ....?
50 12251 00681 1
50 labada Lamber ee ugu horeeya waa wadanka (Country Number)
12251 :waa qaybinta ( Delivery Number)
00681: waa Lamberka alaabta (Articel number)
1:ugu dambeeya waa Lamberka xakameenya koodka ( Conrtol number )
Halkaa waa kaga cadaatay oo aad ogaatay in creamkan laga keenay UK .
Hadii aad raad raacdo Lamberkaas tusaalaha aynu u soo qaadanay wuxuu leeyahay masalooyin iyo raad raaca oo muujinaya raadka alaabta halka laga keenay waxayna qeexaan lambarada ku hoos qoran Seerarka ( Baracode ),maalintii , saacadii iyo kooxdii ( shift) shaqada lahayd ee soo saartay.waana dariiqa qaybta caafimaadka dadwaynuhu ( public Health ) ay ku ogaadaan cunto ama shay lagu marka lagu xanuunsado, waxa kale oo ay xakamaysa ka hortaga wax soo saarka been abuurka ee dhibaatooyin caafimaad iyo mid deegaanba u keeni kara muwaadiniinta tashaday ee ogolaaday in loo taliyo ee dalkooda iyo dadkooda jecel.
Wadan kasta wax uu leeyahay Lumbar wax soo saar, sidaa darteed waxaa la cadeeyay in timirtan lagu soo qorey Made in South Africa ee magaceeda la yidhaaahdo Medjool laga keenay Israel ka dib markii lagu arkay Lumbarkooda wax soo saar, kaas oo ah 729 .
Subject: Re: sidee ku ogaan kartaa cuntada laga keeno israaiil ee loo dhoofiyo caalamka islaamka Sun Sep 05, 2010 7:26 am
maaa shaa alaah waa maqaal muhiim ah